I-Casa Plaza de Marte - Ivulandi enkabeni yedolobha - I-Airbnb
I-Casa Plaza de Marte - Ivulandi enkabeni yedolobha
Santiago de Cuba, i-Cuba
Ikamelo e-izindawo zokuhlala e-cuba ibungazwe ngu-Martha Caridad
Indlu emaphakathi nePlaza de Marte enamagumbi angu-2 (Ilayisensi Yokuqasha 88/15 Santiago de Cuba). Lesi sikhangiso esokubhukha ikamelo elingu-1 eliphindwe kathathu elinovulandi kanye negumbi lokugezela langasese. Inombhede oyi-double ongu-1 140x190cm kanye nombhede womuntu ongu-80x190cm. Isiginali ye-WiFi ekhaya. Kumamitha angama-50 kukhona: isikhungo somlando, izimakethe, izitolo zobuciko, amabha kanye nezindawo zokudlela. Umculo obukhoma kanye nemakethe yasemgwaqweni ngezimpelasonto. E-Plaza uzothola ukuxhumana namatekisi ezindaweni ezingaphandle ezithakazelisayo namabhishi.
Igumbi kathathu, libanzi futhi likhanya abantu abangafika kwabangu-3. Inombhede ophindwe kabili ongu-1 (140x190cm) nombhede womuntu ongu-1 (90x190cm). I-balcony yangasese ebheke i-Plaza kanye negumbi lokugezela langasese elinamanzi ashisayo nabandayo, i-TV ye-LED, ibha encane ne-air conditioning, amakhethini amnyama ukuze alawule ukukhanya kwemvelo okufunayo. Kufakiwe: amashidi kakotini namathawula, insipho yesandla, ukuhlanza igumbi. Itiye lamahhala nekhofi.
Izingcingo zendawo ngocingo lwethu lwasendlini (mahhala).
Ukulethwa komuntu siqu kokhiye bendlu negumbi lakho, sihlala sikhona lapho singena.
4.89 · 87 okushiwo abanye
ISantiago iyidolobha elithulile, futhi iPlaza de Marte iyisiqalo sesikhungo esingokomlando sedolobha. Indlu yethu isendaweni emaphakathi nephephile amahora angama-24 ngosuku. Zonke izinsiza ongazidinga zitholakala lapha eduze nawe. Ukuphila kwabantu baseSantiago kwenzeka phambi kwendlu yethu, kusukela endlini yami idolobha lisezinyaweni zakho. NgeMigqibelo nangeSonto kunemisebenzi yamasiko ePlaza de Marte.
Ibungazwe ngu-Martha Caridad
Ngifuna izivakashi zami zizizwe zisekhaya futhi ngingasiza nganoma yini eziyidingayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Santiago de Cuba namaphethelo